Vagadziri ikozvino vane beta 5 yewatchOS 4.3.1 uye tvOS 11.4 inowanikwa | Ndinobva mac
Vagadziri ikozvino vane beta 5 yewatchOS 4.3.1 uye tvOS 11.4 iripo
Imwezve vhiki tine shanduro itsva dziripo beta yewatchOS 4.3.1 uye tvOS 11.4 vagadziri. Mune ino kesi, iri beta 5 uye kumwe kunatsurudzwa uye kugadzirisa zvipenga kunowedzerwa kuti iyo vhezheni igadzikane sezvinobvira. Ndinovimba Apple inovandudza mamwe mabugs mune ino beta vhezheni yeApple Watch, kunyanya iko kukanganisa kunokonzeresa kuti mudziyo ugare wakazara nechando muapuro uye izvo zvinogona kugadziriswa chete neyakaomarara reset yeiyo wachi.
Chero zvazvingaitika beta mhando dzekuvandudza izvozvi zvave kuwanikwa kurodha pasi uye pamusoro peizvi isu tine beta vhezheni 5 yeIOS, zvakare neyakajairika bug fixes uye kugadzirisa mune system kugadzikana.
Beta 5 yewatchOS 4.3.1 uye tvOS 11.4 vagadziri
Hatifunge kuti vanotora nguva yakareba kuti vaburitse vhezheni yekupedzisira yeshanduro idzi, asi izvozvi tinoramba tichiwedzera mabheta kune iyi vhezheni. Hatina mubvunzo kuti kunatsurudzwa kuripo mune idzi shanduro dzakaburitswa, asi zviri pachena kuti izvi hazvisi kuvandudzwa muchimiro kana sarudzo nyowani dziripo sisitimu, mazhinji acho akaruramisa matambudziko aonekwa.
Kana iwe uri mugadziri uye iwe waisa iyo yapfuura betas, iwe unongofanirwa kumirira kuti ugamuchire inoenderana ziviso kana kumanikidza iyo kuburikidza nemaSystem echigadzirwa chako. Kana zvisiri, mune iyo Apple TV uchafanirwa kubatanidza komputa yako uye kuburikidza neXcode, kurodha pasi uye nekuisa inoenderana beta. Semazuva ese Tinokurudzira kugara kunze kweiyi beta vhezheni kune vanogadzira kana usiri mugadziri, sezvo zvingave zvisingawirirane nechero chekushandisa chaunoshandisa zuva nezuva kana zvakafanana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Vagadziri ikozvino vane beta 5 yewatchOS 4.3.1 uye tvOS 11.4 iripo
macOS Yakakwira Sierra 10.13.5 beta 5 ikozvino yave kuwanikwa kune vanogadzira
0% mari paApple inopera mwedzi uno